Tian'ny mpizahatany gourmet an'i Lyon: Androany dia nisy baomba nipoaka tao amin'ny Brioche Bakery
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tian'ny mpizahatany gourmet an'i Lyon: Androany dia nisy baomba nipoaka tao amin'ny Brioche Bakery
Lyon dia fantatry ny olona tia gourmet sy mpandeha eran'izao tontolo izao. Ny Brioche Dorée Bakery dia toerana ankafizin'ny trano fisakafoanana any an-tanàn-dehibe natsangana tamin'ny toky tsotra hanolotra vokatra frantsay nentin-drazana manana kalitao sy fahasalamana miavaka amin'ny sehatry ny serivisy haingana. Brioche Bakery dia ao amin'ny faritra misy mpandeha an-tongotra sy mponina malaza eto amin'ity tanànan'ny frantsay mahafinaritra ity.
Androany ity mpivaro-mofo ity no nanjary toerana nisehoan'ny asa fampihorohoroana farany tany Frantsa. Soa ihany, ity fanafihana ny alakamisy hariva tokony tamin'ny 5.00 hariva ity dia tsy mahafaty fa nanana ny mety ho trangana heloka lehibe kokoa. Mampiseho ny horonantsary avy any an-toerana fa nisy fahasimbana kely tao amin'ilay fipoahana ny cafe Brioche Dorée, izay toa somary kely ihany.
Ny vavolombelona koa dia nitatitra fa nahita visy, izay nolazain'ny tompon'andraikitra iray ao an-toerana fa anisan'ny baomba. Ny prefektiora dia nilaza fa farafahakeliny olona 8 no naratra nandrahona ain'olona, ​​fa ny haino aman-jery frantsay kosa dia nahatratra 13 ny isa, isan'izany ny zaza iray sy olona roa izay mety naratra mafy. Brioche Dorée fivarotan-tsakafo ao Rue Victor Hugo dia notifirin'ny polisy tamin'ny alàlan'ny fitaratra sy fako nanaparitaka ny tany. Ny fipoahana dia nitranga tany amin'ny saikinosy afovoany teo anelanelan'ny renirano Saône sy Rhône izay namakivaky ny tanàna.
Ny filoha frantsay Emmanuel Macron dia namaritra ny fipoahana ho toy ny “fanafihana” ary nilaza fa miaraka amin'ireo tra-boina ny eritreriny. Tsy fantatra ny antony manosika fa avy hatrany, saingy nanokatra ny fanadihadiana ireo mpampanoa lalàna noho ny fiahiahiany ho mpampihorohoro ary fikasana hamono olona.
Ny biraon'ny mpampanoa lalàna dia nilaza fa ahiahiana ny olona iray fonosana baomba wno nahatonga ny fipoahana
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena any Ontario: Niakatra 7% ny isan'ireo mpandeha tamin'ny volana aprily